Gọvanọ Sivas Salih Ayhan nyochara ọrụ ndị na-aga n'ihu na High Speed ​​Train (YHT) Eşmebaşı Ọwara. Gọvanọ Ayhan na ndị na-eso ya gọzịkwara ndị ọrụ ji oge ha niile n'ọrụ. Ankara-Sivas YHT akara [More ...]
Ala nke Ugbo Ala kwesiri ighaputa nri na ume ya choro, ma tinye ya n’igwe ibanye n’elu ya, ya na ihe eji eme ala. Firmlọ ọrụ Italiantali Stefano Boeri Architetti nwere ọgụgụ isi ma na-adigide na Cancun, Mexico [More ...]
Ekrem İmamoğlu, onye isi obodo Istanbul Metropolitan Municipality (İBB), keere òkè na mmemme ụzọ ụgbọ oloko a haziri maka Ataköy-İkitelli Metro, nke a ga-ejikọ ya na Marmaray, akara usoro metro dị iche iche 4 na-arụ n'obodo. Mmeme İkitelli [More ...]
Obodo Büyükşehir, nke mere nnukwu ego na njem ụgbọ njem n'obodo, eruola 75th Yıl Neighborhood site na Hospitallọ Ọgwụ City na Kumlubel site na Opera, wee bido ikpe ikpe na larịị Opera-Kumlubel. kwa [More ...]
Onye isi oche İBB Ekrem İmamoğlu mere nyocha na Mcidiyeköy-Mahmutbey Metro Line's Nurtepe Station. N'ikwu na ha na-eme atụmatụ itinye ọrụ ahụ na Mee 19, mana usoro ọgbaghara ahụ anaghị ekwe nke a, "ignersmamoğlu kwuru," Ndị mba ọzọ maka usoro akara nke akara ahụ. [More ...]
N'ime usoro ọrụ ọhụụ nke andlọ Ọrụ na Chemical Corporationlọ Ọrụ (MKEK), usoro mmepụta ọhụụ ejiri igwe na nke ala mejupụtara batara ọrụ na zilọ ọrụ Gazi Fişek. Ọ ga - ewepụ kpamkpam ịdabere na mba ọzọ, kpamkpam [More ...]
A mụrụ ya na mpaghara Divrigi nke Sivas na 1886; Ọ nwụrụ na Istanbul na November 13, 1957. otu n'ime ndi mbu azụmaahịa na ụlọ ọrụ ụgbọ elu dị na Turkey. Razọ ụgbọ elu emeela nnukwu ego na Republic of Turkey na mmepe mmepụta ihe na Turkey [More ...]
Sivas-Samsun, Turkey mbụ ígwè ụzọ ụgbọ okporo ígwè e meghere, otu nke ụzọ mgbe banyere 5 ọrụ afọ ka ime nke ugbua. TCDD nke emechiri na June 12 nke 2015 na akụrụngwa na ụkpụrụ ndị na-enweghị atụ dị elu. [More ...]
Arkas Logistics ga - ebu ụzọ kacha ukwuu na nke kachasị ogologo, ụgbọ mmiri na - ebupụ ụgbọ elu, niile n'otu oge. Igwe eletriki eletriki sitere na Bilecik Bozüyük ruo Osh obodo Kyrgyzstan na njem nke Arkas Logistics bu [More ...]
Obodo Bursa nke Bursa, nke gbanwere usoro ngbanwe ka ọ bụrụ ohere na Bursa ma mee ihe dị ka puku tọn 30 puku ụzọ paịlị na-ekpo ọkụ n'ime izu abụọ gara aga, dịkwa n'oge mmachi ahụ na-ekpuchi 1-2-3 May. [More ...]
Mweghachi n ’ụlọ ọdụ akụkọ ihe mere eme, ebe K Osmanrklareli Gọvanọ Osman Bilgin kwupụtara na a ga-emeghe ya dị ka ọdịbendị na cafe na ọnwa ndị na-adịbeghị anya, ẹkenịmde. Gọvanọ Bilgin anọwo na-anọ nkịtị ruo ọtụtụ afọ n'ụlọ ọrụ akụkọ ihe mere eme na etiti obodo. [More ...]
Buildinglọ osisi vaịn dị n'akụkụ gafee Alsancak Ọdụ, otu n'ime ihe ọdịbendị dị mkpa nke İzmir, bụ ụlọ ebe a na-edebe ụlọ mgbe ahụ. Ebe nlegharị anya Izmir TCDD na Art Gallery, ebe ezigbo ndị akaebe ga-ezute gị, bụ ebe nchekwa nke ụzọ ụgbọ oloko na Anatolia [More ...]
Çamlık Steam Locomotive Museum ma ọ bụ Çamlık Railway Museum bụ ụlọ ebe a na-emeghe emeghe nke dị na Çamlık dị na Selçuk nke mpaghara Izmir. ndị kasị ibu bụ kasị ụgbọ okporo ígwè ngosi nka na ngosi nka collections na Europe na Turkey [More ...]
Gọvanọ Karabük Fuat Gürel nyochara akụrụngwa na ọrụ ịgbasawanye okporo ụzọ nke ndị otu Pọtugal Special Special butere n'okporo ụzọ Keltepe Ski Center ma nata ozi n'aka ndị ọchịchị. Ka eji ya rụọ ọrụ na ọrụ mgbasawanye okporo ụzọ [More ...]
Onye isi oche İBB Ekrem İmamoğlu mere nyocha na Alibeyköy - Eminönü Tram Line, nke kwesịrị ịgbari kilomita 1,3 nke mpaghara ahụ n'ihi mgbawa ala. Pelin Alpkökin, Onye isi nke Ngalaba Rail Systems Department, nwere ahụmịhe tupu etinye ya n'ọrụ [More ...]